Sida loo doorto binoculars: talooyinka iyo tabaha ugu fiican | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 09/06/2022 10:00 | Kala bixid
Suuqa waxa uu bixiyaa buug-gacmeedyo ballaadhan oo aan is barbar dhigi karno oo aan dooran karno binoculars-yada ugu wanaagsan ee codsiyada kala duwan oo ay ku jiraan daawashada shimbiraha, doomaha, kaamamka, ugaarsiga, ciyaaraha, riwaayadaha, ilaalinta, xiddigiska, iyo in ka badan. Si aad wax u barato sida loo doorto muraayadaha indhaha xoogaa dhib ayay noqon kartaa. Wax kasta oo isticmaaluhu u baahan yahay, waxa jira indho-indhayn leh nakhshad sax ah iyo waxqabad ujeeddadooda. Si loo doorto muraayadaha ugu habboon, waa inaan ku xisaabtannaa doorsoomayaal kala duwan sida deegaanka, dookhyada gaarka ah, waxqabadyada, iwm.
Sababtan awgeed, waxaan dooneynaa inaan u hibeyno maqaalkan si aan kuugu sheegno sida loo doorto muraayadaha, sifooyinka iyo muhiimada.
1 Sida loo doorto muraayadaha indhaha
1.2 Dhexroor muraayadda ujeedada
1.3 ka bixi arday
1.4 Goobta Muuqaalka (FOV)
1.5 Fogaansha lens/indhaha
1.6 Dhererka ugu yar
Iftiiminta iyo hufnaanta sawirada lagu arko muraayadaha indhaha, gaar ahaan, waxaa lagu go'aamiyaa arrimo kala duwan. Weyneynta, daawaynta muraayadaha iyo dhexroorka ujeedada waa uun qaar ka mid ah arrimaha saameeya waxqabadka muraayadaha indhaha.
Si kastaba ha ahaatee, shuruudaha aasaasiga ah ee binoculars waa tayada muuqaalkooda. Celestron waa qiimo loogu talagalay sumadda lacagta oo bixisa muuqaalo tayo sare leh oo ay ugu mahadsantahay muraayadaha si taxadar leh loo doortay iyo daawaynta indhaha, hababka wax soo saarka saxda ah iyo xakamaynta tayada ballaaran.
Weynayntu waa heerka waynaynta shayga la arkay. Tusaale ahaan, 7x42 binoculars, lambarka 7 macnaheedu waa "weyneynta qalabka." 7x binoculars waxay weyneeyaan walxaha 7 jeer marka loo eego isha bini'aadamka. Weynayntu waxay saamaysaa dhalaalka sawirka, sidaas awgeed hoos-u-weynaynta muraayadaha indhaha, ayaa sawirku noqon doonaa mid dhalaalaya. Sida caadiga ah, korodhka weyneynta waxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaada aragtida.
Dhexroor muraayadda ujeedada
Muraayada ujeedka leh ee muraayadaha indhaha waxay ku yaalliin xagga hore waxayna leedahay dhexroorka ugu weyn. Dhexroorka ( millimitirka) ee mid ka mid ah muraayadaha ayaa ah tirada sifada labaad ee binoculars. Kiiskan, 7x42 binoculars waxay leeyihiin ujeedo dhexroor 42mm ah. Dhexroorka muraayadda ujeeddadu waxay go'aamisaa awoodda ururinta iftiinka ee binoculars, markaa dhexroorku wuu weynaadaa, wuu sii ifayaa oo aad u jilicsan yahay sawirka. Tani waxay si gaar ah faa'iido u leedahay xaaladaha iftiinka hooseeya iyo habeenkii.
Tani waxay kuu horseedi kartaa inaad u maleyso in dhexroorka weyni, uu si fiican u qalabaysan yahay, laakiin dhab ahaantii, dhexroorka muraayadda oo ay weheliso cabbiraadyo kale sida ardayga ka baxa iyo isticmaalka muraayadaha indhaha waa in la tixgeliyo si loo go'aamiyo xuduudaha ugu habboon.
ka bixi arday
"Ardayga ka baxa" waxaa lagu qeexi karaa dhexroorka, millimitirka, ee iftiinka iftiinka ee ka soo baxaya muraayadda indhaha ee binoculars. Hadba inta uu sii weynaado ardayga ka bixista, ayaa sawirka ka dhalanaya sii ifaya. Lahaanshaha arday ka bixitaan weyn waxay sahlaysaa in lagu eego habeenkii iyo iftiin hooseeya. Codsiyada cilmiga xiddigiska, ardayga ka baxa muraayadaha indhaha waa inuu la siman yahay heerka uu ardaygu u kala furfurmayo marka uu mugdiga la qabsado.
Si loo xisaabiyo ardayga ka baxay, u qaybi dhexroorka ujeeddada qodobka weynaynta. Tusaale ahaan, 7x42 binoculars waxay leeyihiin arday bixitaan 6mm ah.
Goobta Muuqaalka (FOV)
Meesha lagu arki karo muraayadaha indhaha waxaa lagu magacaabaa goobta muuqaalka. Goobta muuqaalka waxaa badanaa lagu muujiyaa bannaanka muraayadaha waxaana lagu cabbiraa darajo. Goobta tooska ah ee muuqaalka waa aagga laga arki karo 1000 yards (915 mitir), oo lagu qiyaasay cagood. Muuqaalka weyni wuxuu u tarjumaa aag weyn oo lagu arko muraayadaha indhaha.
Goobta aragtidu waxay la xiriirtaa weyneynta, kor u kaca weyneynta, goobta yar ee muuqaalka. Intaa waxaa dheer, goob weyn oo muuqaal ah waxay keentaa hoos u dhaca isha / isha. Muuqaalka ballaaran ee aragtida ayaa faa'iido u leh xaaladaha ay walxuhu socdaan. Si loo xisaabiyo goobta muuqaalka toosan, ku dhufo xagasha goobta muuqaalka 52,5. Tusaale ahaan, binocular-yada leh goob muuqaal ah 8o waxay dabooshaa goob toosan oo muuqaal ah 420 cagood (126 mitir).
Fikradani waxay tilmaamaysaa fogaanta (milimitir) in binoculars laga sooci karo isha iyadoo la ilaalinayo muuqaal raaxo leh. Dadka muraayadaha indhaha ku xidha ayaa ka faa'iidaysan doona masaafo dheer.
Waa masaafada u dhaxaysa binoculars iyo shayga ugu dhow kaas oo diiradda lagu saari karo iyada oo la ilaalinayo muuqaal wanaagsan.
Awoodda binocular ee uu ku qabto oo uu gudbiyo iftiin ku filan si uu u soo saaro muuqaal dhalaalaya oo cad ayaa go'aamiya dhalaalkiisa. Iftiiminta muraayadaha indhaha ayaa sidoo kale kor u qaadaya farqiga u dhexeeya midabada sawirka la arkay.
Tusaha Iftiinka Qaraabada (RBI), Tusaha Twilight iyo Waxtarka Iftiinka Qaraabada (RLE) waa indexes caadi ahaan loo isticmaalo warshadaha binocular, laakiin marar badan ayaa si khaldan loo fahmay ama fikrado aan macno lahayn.
Iftiimintu waa fikrad lagu xisaabtamayo marka la dooranayo muraayadaha indhaha, laakiin maaha qodobka ugu muhiimsan.
Iftiinku wuxuu ku xiran yahay dhowr cabbir, oo ay ku jiraan dhexroorka ujeeddada, weyneynta, nooca iyo tayada muraayadda la isticmaalo, habaynta muraayadaha indhaha, iyo nooca priism ee la isticmaalo. Guud ahaan, dhexroor weyn, awood hoose ama dhexdhexaad ah, muraayado si buuxda u daboolan ayaa ku habboon.
Prisms in binoculars ayaa loo isticmaalaa in lagu rogo sawirada oo waxay ku yimaadaan laba naqshad: saqafka iyo tiirka. Saqafyada saqafka ayaa ka fudud oo is haysta naqshad ahaan. Prisms-yada waxaa lagu magacaabaa BK7 (borosilicate) iyo BaK-4 (glaas barium). Labaduba waa raqiis oo aad waxtar u leh. Qurxinta naqshadeeye BaK-4 waxay leedahay cufnaan sare (tusmaynta dib-u-celinta) taas oo gebi ahaanba baabi'isa iftiinka gudaha, taasoo keentay sawirro qeexid sare leh.
Isbarbardhigga waa heerka ay labada shay ee iftiinka iyo mugdiga ah kaga duwan yihiin asalka sawirka. Kala duwanaanshiyaha sare wuxuu caawiyaa in la arko walxo daciif ah oo la garto tafaasiisha wanaagsan. Isbarbardhigga waxaa saameeya xallinta.
Mar kasta oo xallintu ay sarreyso, ayaa ka duwanaanshiyaha sarreeya. Habaynta indhaha oo tayo sare leh ayaa bixisa sawiro isbarbar dhig heersare ah. Waxyaalaha kale ee saameeya isbarbardhigga waa isku-dhafka, qaska hawada, iyo tayada ujeedooyinka, prisms, iyo muraayadaha indhaha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto sida loo doorto muraayadaha indhaha iyo waxa ay tahay inaad ku xisaabtanto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Sida loo doorto muraayadaha indhaha